यो कोटिले क्याल्कका लागि गणितीयप्रकार्य समाहित गराउँदछ । विजार्ड प्रकार्य खोल्न घुसाउनु होस्- प्रकार्य रोज्नुहोस्रोज्नुहोस् ।
सङ्ख्याको निश्चित मान फर्काउँदछ ।
सङ्ख्या त्यो मान हो जसको निश्चित मान गणना हुन्छ ।
=ABS(-56) ५६ को निश्चित मान फर्काउनेछ
=ABS(12) 12 मान फर्काउनेछ
=ABS(0)0मान फर्काउनेछ
ले सङ्ख्याको उल्टो त्रिकोणमितिय कोसाइन फर्काउँदछ ।
सङ्ख्या त्यो मान हो, जसको उल्टा त्रिकोणमितिय कोसाइन मान गणना गर्नुपर्ने छ ।
=ACOS(-1) 3.14159265358979 (PI radians) फर्काउँदछ
सङ्ख्याको विपरित हापरबोलिक कोसाइन फर्काउँदछ ।
सङ्ख्यामान हो जसमा विपरित हाइपरबोलिक कोसाइन गणना हुन्छ ।
=ACOSH(1)ले ० फर्काउँदछ ।
=ACOSH(COSH(4))4फर्काउँछ ।
दिएको सङ्ख्याको विपरित को ट्यान्जेनट फर्काउँदछ ।
सङ्ख्या मान हो जसमा वितरित कोटेन्जेन्ट गणना हुन्छ ।
=ACOT(1) ले 0.785398163397448 (PI/4 radians) फर्काउँछ ।
दिएको सङ्ख्याको विपरित हाइपरबोलिक कोटेन्जेन्ट फर्काउँदछ ।
सङ्ख्या मान हो जसमा विपरित हापरबोलिक कोट्यानजेन्ट गणना हुन्छ ।
=ACOTH(1.1) ले inverse hyperbolic cotangent of 1.1, लगभग 1.52226 फर्काउँछ।
ले सङ्ख्याको उल्टा त्रिकोणमितिय साइन फर्काउँदछ ।
सङ्ख्या त्यो मान हो जसको उल्टा त्रिकोणमितिय साइन गणना गर्नुपर्ने छ ।
=ASIN(0) ले0फर्काउँछ ।
=ASIN(1) ले 1.5707963267949 (PI/2 radians) फर्काउँछ ।
सङ्ख्याको विपरित हाइपरबोलिक साइन फर्काउँदछ ।
सङ्ख्यामान हो जसमा विपरित हापरबोलिक साइन गणना हुन्छ ।
=ASINH(-90) ले लगभग -5.1929877 फर्काउँछ ।
=ASINH(SINH(4)) ले4फर्काउँछ ।
ले सङ्ख्याको उल्टा त्रिकोणमितिय ट्यान्जेन्ट फर्काउँदछ ।
सङ्ख्या त्यो मान हो जसको उल्टा त्रिकोणमितिय ट्यान्जेन्ट मान गणना गर्नुपर्ने छ ।
=ATAN(1) ले 0.785398163397448 (PI/4 radians) फर्काउँछ ।
ले निर्दिष्ट गरिएको x र y निर्देशांकहरूको उल्टा त्रिकोणमितिय ट्यान्जेन्ट फर्काउँदछ ।
ATAN2(Number x; number y)
सङ्ख्या x x समकक्षका लागि मान हो ।
सङ्ख्या y y समकक्षका लागि मान हो ।
=ATAN2(20;20) ले 0.785398163397448 (PI/4 radians) फर्काउँदछ ।
सङ्ख्याको विपरित हाइपरबोलिक स्पर्शरेखा फर्काउँदछ ।
सङ्ख्यामान हो जसमा विपरित हाइपरबोलिक स्पर्शरेखा गणना हुन्छ ।
=ATANH(0)0फर्काउँदछ ।
गुणनको महत्व नजिकमा सङ्ख्या माथि सम्म परिक्रमा गर्दछ ।
CEILING(सङ्ख्या; महत्व; मोड)
सङ्ख्या सङ्ख्या हो त्यो राउन्ड गरेर बन्छ ।
महत्व त्यो सङ्ख्या हो जसको गुणन मान माथि परिक्रमण हुन्छ ।
=CEILING(-११;-२)ले -१० फर्काउदछ
=CEILING(-११;-२;०)ले -१० फर्काउदछ
=CEILING(-११;-२;१)ले -१२ फर्काउदछ
=CEILING.PRECISE(-11;-2)ले -१० फर्काउँदछ
वस्तुहरूको दिइएका सङ्ख्याका लागि संयोजनहरूको सङ्ख्या फर्काउँदछ ।
COMBIN(count 1; count 2)
गणना १ तत्वहरूको कूल सङ्ख्या हो ।
गणना २ तत्वहरूबाट चयन गरिएको गणना हो ।
=COMBIN(3;2)ले ३ फर्काउँदछ ।
वस्तुहरूको (दोहोर्याउने संलग्न भएको) दिएको सङ्ख्याका लागि संयोजनहरूको सङ्ख्या फर्काउँदछ ।
COMBINA(count 1; count 2)
=COMBINA(3;2)ले ६ फर्काउँदछ ।
यो प्रकार्यले तपाईँलाई युरोपेली मुद्रा युरोमा रुपान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ ।
मान मुद्रामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने रकम हो ।
From_currency र To_currency मुद्रा एकाइहरू बाट कन्वर्ट गर्न र क्रमशः क्रमबद्ध हुन्छन्। यो पाठ हुनुपर्छ, मुद्राका लागि आधिकारिक संक्षिप्त नाम (उदाहरणको लागि, "EUR")। दरहरू (यूरो प्रतिमा देखाइएका) युरोपेली कमिटी द्वारा तय गरिएको थियो।
=EUROCONVERT(100;"ATS";"EUR") १०० अष्ट्रेलियन स्चिलिङ युरोमा रूपान्तरण गर्दछ।
=EUROCONVERT(100;"EUR";"DEM") १०० युरो जर्मन मार्कमा रूपान्तरण गर्दछ।
दिएको सङ्ख्या (कोण)को कोसाइन फर्काउँदछ ।
सङ्ख्या मान हो जसमा कोसाइन गणना हुन्छ ।
=COS(PI()*2) फर्काउँदछ 1, 2*PI radians को cosine ।
=COS(RADIANS(60)) ले 0.5 फर्काउँछ , 60 डिग्रिको cosine
सङ्ख्याको हापरबोलिक कोसाइन फर्काउँदछ ।
सङ्ख्या मान हो जसमा हाइपरबोलिक कोसाइन गणना हुन्छ ।
=COSH(0) ले १ फर्काउछ, ० को हाइपरबोलिक कोसाइन (hyperbolic cosine)।
दिएको कोणको कोट्यान्जेन्ट फर्काउँदछ ।
सङ्ख्या मान हो जसमा कोट्यान्जेन्ट गणना हुन्छ ।
=COT(PI()/4) ले को PI/४ रेडियनको कोट्यान्जेन्ट १ फर्काउँदछ।
=COT(RADIANS(45))ले १ फर्काउँदछ, कोण ४५ को कोट्यान्जेन्ट।
दिएको सङ्ख्या (कोण)को हाइपरबोलिक कोट्यान्जेन्ट फर्काउँदछ ।
सङ्ख्या मान हो जसमा हाइपरबोलिक कोट्यान्जेन्ट गणना हुन्छ ।
=COTH(1) ले inverse hyperbolic cotangent of १.१, लगभग १.३१३० फर्काउँछ।
=CSC(RADIANS(30))ले २, ३० डिग्रीको कसेकान्ट परिणाम फर्काउँदछ।
सङ्ख्याको हापरबोलिक कोसेकान्ट फर्काउँदछ।
रेडियनहरू डिग्रीमा रूपान्तरन गर्दछ ।
सङ्ख्या रूपान्तरण गर्नुपर्ने मान ।
ले धनात्मक सङ्ख्या नजिकको जोड इन्टिजर माथि सम्म र ऋणात्मक सङ्ख्या नजिकको बिजोड इन्टिजर तल सम्म परिक्रमण गर्दछ ।
सङ्ख्या परिक्रमण हुनुपर्ने सङ्ख्या हो ।
=EVEN(2.3)ले ४ फर्काउदछ।
=EVEN(2)ले २ फर्काउदछ।
=EVEN(0) ले ० फर्काउँदछ।
=EVEN(-0.5)ले -२ फर्काउदछ।
ले सङ्ख्याको शक्तिमाeवृद्धि फर्काउँदछ । स्थिरांकeसंग लगभग २.७१८२८१८२८४५९०४ को मान छ ।
सङ्ख्या पावर हो जसलाईeबढाउनु पर्दछ ।
=EXP(1) ले Calc शुद्धताको गणित निरन्तरe२.७१८२७१२७४५९०४ फर्काउदछ।
सङ्ख्याको क्रमगुणन फर्काउँदछ । FACT(0) ले १ फर्काउँदछ. FACT(n) ले १*२*३*४* ... *n फर्काउँदछ ।
सङ्ख्या मान हो जसमा क्रमगुणन गणना हुन्छ ।
FACT(३)ले ६ फर्काउँदछ ।
=FACT(0)ले १ फर्काउँदछ।
ले महत्वको नजिकको गुणन तल सम्म सङ्ख्या परिक्रमण गर्दछ ।
FLOOR(सङ्ख्या; सिग्निफिकेन्स; मोड)
सङ्ख्या सङ्ख्या हो जसलाई तल राउन्ड गरिएको हुनु पर्दछ ।
सिग्निफिकेन्स मान हो जसमा गुणन सङ्ख्याको तल राउन्ड गरिएको हुनु पर्दछ ।
=FLOOR( -११;-२)ले -१२ फर्काउँछ
=FLOOR( -११;-२;१)ले -१० फर्काउँछ
=FLOOR( -11; -2)ले -१२ फर्काउँछ
दुई वा धेरै इन्टेजरहरूको सबै भन्दा ठूलो भाजक फर्काउँदछ ।
GCD(integer 1 to 30)
इन्टिजर १ देखि ३० ३० भन्दा बढी इन्टेजरहरू छन् जसमा सबभन्दा ठूलो साझा भाजक गणना हुन्छ ।
=GCD(16;32;24) ले ८ परिणाम दिन्छ, किनकी ८ सबै भन्दा ठूलो संख्या हो जसले १६, २४ र ३२ लाई शेष ​नराखि भाग गर्न सक्छ​।
सङ्ख्या(हरू): ३० भन्दा माथिको सङ्ख्याहरूको सूची ।
तल सबभन्दा नजिको इन्टिजरमा सङ्ख्या घुसाउनु होस् ।
सङ्ख्या सङ्ख्या हो जसलाई सबभन्दा नजिककको इन्टिजरमा तल बनाउनु पर्दछ ।
=INT(5.7)ले ५ फर्काउदछ।
=INT(-1.3)ले -२ फर्काउदछ।
=ISO.CEILING(-11;-2)ले -१० फर्काउँदछ
एक वा बढी इन्टिजरहरूको कमसेकम साझा गुणन फर्काउँदछ ।
LCM(integer 1 to 30)
इन्टिजर १ देखि ३० ३० भन्दा इन्टिजरहरू छन् जसमा सबभन्दा सानो साझा गुणन गणना गर्दछ ।
यदि तपाईंले ५१२;१०२४ र २००० संख्याहरू इन्टिजर १;२ र ३ पाठ बाकसहरूमा प्रविष्ट गर्नुहुन्छ भने, १२८००० परिणामको रूपमा फर्काइनेछ।
ले सङ्ख्याको स्थिरांक ई मा आधारित प्राकृतिक लघुगणक फर्काउँदछ । स्थिरांक ई सँग लगभग २.७१८२८१८२८४५९०४ मान छ ।
सङ्ख्यामान हो जसमा प्राकृतिक लघुगणक गणना हुन्छ ।
=LN(3)३ को प्राकृतिक लघुगणकले नतिजाको रुपमा परिक्रमित मान (लगभग १.॰९८६) फर्काउँछ।
=LN(EXP(३२१))ले ३२१ फर्काउँदछ ।
निर्दिष्ट आधारमा सङ्ख्याको लघुगणक फर्काउँदछ ।
सङ्ख्यामान हो जसमा लघुगणक गणना हुन्छ ।
आधार लघुगणक गणना गर्नका लागि आधार हो ।
=LOG(१०;३)ले १० को आधार ३ लगारिथ्म( लगभग २.०९५९)फर्काउदछ।
=LOG(७^४;७)ले ४ फर्काऊदछ।
सङ्ख्याको आधार-१० लघुगणक फर्काउँदछ ।
सङ्ख्या मान हो जसमा आधार १०मा भएको लघुगणक गणना हुन्छ ।
=LOG10(५)ले ५ को आधार-10 लगारिथ्म( लगभग ०.६९८९७) फर्काउदछ।
सङ्ख्या भाजक द्वादा भाग गरिसके पछि शेष फर्काउँदछ
पूर्णांक तर्कहरूका लागि यो प्रकार्यले लाभांश मोड्युल डिभाइसलाई फर्काउँछ, त्यो बाँकी होलाभांशविभाजित छदिविजर
यो प्रकार्य भाज्य - भाजक * INT(भाज्य/भाजक) को रूपमा कार्यान्वित गरिएको छ , र यदि आर्गुमेन्टहरू पूर्णांक छैनन् भने यस सूत्रले नतिजा दिन्छ।
=MOD(22;3)ले 1 फर्काउँछ, शेष जब 22 लाई3ले विभाजित गर्छ​।
=MOD(11.25;2.5) ले 1.25 फर्काउछ |
परिणाम सङ्ख्याको सबभन्दा नजिकको इन्टिजर गुणन हो ।
=MROUND(15.5;3)ले 15 फर्काउँछ, जस्तै 15.5 18(=3*6) भन्दा 15(=3*5) को नजिक छ।
=MROUND(१.४;०.५)ले १.५(= ०.५*३) फर्काउदछ।
यदि F11देखि H11ले मानहरू 2,3 र4समावेश गराएको खण्डमा =MULTINOMIAL(F11:H11) ले 1260 फर्काउँदछ । यसले सूत्रमा अनुरूप गराउँदछ =(2+3+4)! / (2!*3!*4!)
धनात्मक सङ्ख्या नजिकको बिजोर इन्टिजर माथि सम्म र ऋणात्मक सङ्ख्या नजिकको बिजोर सङ्ख्या तल सम्म परिक्रमण गर्दछ ।
सङ्ख्या परिक्रमण गर्नुपर्ने सङ्ख्या हो ।
=ODD(१.२)ले ३ फर्काउदछ।
=ODD(1) ले 1 फर्काउँछ |
=ODD(०)ले १ फर्काउदछ।
=ODD(-३.१)ले -५ फर्काउँदछ।
PI को मान(राउन्ड गरेको मान ३.१४१५९) फर्काउँदछ ।
=PI()ले ३.१४१५९२६५३५८९७९ फर्काउँदछ ।
पावरमा बढेको सङ्ख्याको परिणाम फर्काउँछ ।
POWER(base; power) or base ^ power
पावरको एक्स्पोनेंटमा बढाईएकोआधार फर्काउँदछ।
=POWER(4;3) ले ६४ फर्काउँदछ, जुन ४ को पावर ३ हो।
भाग सञ्चालनको इन्टिजर परिणाम फर्काउँदछ ।
=QUOTIENT(11;3)ले3फर्काउँछ।2को शेषलाई बिर्सि दिन्छ।
डिग्रिहरूलाई रेडियनमा रूपान्तरण गर्दछ ।
डिग्रिहरूमा कोणकोसङ्ख्या हो ।
० र १ को बीचमा र्यानडम सङ्ख्या फर्काउँदछ ।
ले परिभाषित गरिएको सिमा मा पर्ने जथाभाबि इन्टिजर सङ्ख्या फर्काउँदछ।
RANDBETWEEN (तल; माथि)
=RANDBETWEEN (20;30) ले २० र ३०को बीचको इन्टिजर फर्काउँदछ।
दशमलब स्थानहरूको निश्चित सङ्ख्या सम्म सङ्ख्याहरू फर्काउँदछ ।
फर्काउँछसंख्या गोल गरियो गणना गर्नुहोस् दशमलव स्थानहरू। यदि गणना मेटाइएको छ वा शून्य, प्रकार्य राउन्ड निकटतम पूर्णांकमा। यदि गणना नकारात्मक छ भने, प्रकार्य राउन्ड निकटतम 10, 100, 1000, आदिमा।
=ROUND(२.३४८;२)ले २.३५ फर्काउदछ
=ROUND(-32.4834;3)ले -३२.४८३ फर्काउँछ। सबै दशमलवहरू हेर्न सेल ढाँचा परिवर्तन गर्नुहोस्।
=ROUND(२.३४८;०)ले २ फर्काउदछ।
=ROUND(२.५)ले ३ फर्काउदछ।
=ROUND(९७८.६५;-२)ले १००० फर्काउदछ।
सङ्ख्या तल शून्य अगाडि राउन्ड गर्दछ ।
=ROUNDUP(१.२३४५;१)ले १.३ फर्काउदछ।
=ROUNDUP(१.२३४५;१)ले ४५ फर्काउदछ।
=ROUNDDOWN(-४५.६७)ले -४५ फर्काउदछ।
=ROUND(९७८.६५;-२)ले ९०० फर्काउदछ।
निर्दिष्ट दशमलव स्थान अनुसार सङ्ख्याको माथि राउन्ड गर्दछ ।
संख्या घुमाइएको (शून्य भन्दा टाढा) गणना दशमलव स्थानहरूमा। यदि गणना छोप्ने वा शून्य हुन्छ भने, प्रकार्य एक पूर्णांक सम्म पुग्छ। यदि गणना नकारात्मक छ भने, प्रकार्य अर्को 10, 100, 1000, इत्यादि सम्म हुन्छ।
=ROUNDUP(१.११११;२)ले १.१२ फर्काउदछ।
=ROUNDUP(४५.६७;०)ले ४६ फर्काउदछ।
=ROUNDUP(-४५.६७)ले -४६ फर्काउदछ।
सङ्ख्या रेडियनहरूमा कोण हो ।
=SEC(RADIANS(60))ले2फर्काउँछ, कोण 60 को सेकेन्ट​।
सङ्ख्याको हाइपर्बोलिक् सेकेन्ट फर्काउँछ।
सङ्ख्या सङ्ख्या हो जसमा हापरबोलिक साइन गणना हुन्छ ।
=SECH(0)ले 1 फर्काउँछ,0को हाइपर्बोलिक् सेकेन्ट।
पावोर सिरिजमा पहिलो टर्महरुको योगफल निकाल्दछ।
ERIESSUM(x; n; m; coefficients)
X पावर सीरीजको लागि निवेश मान हो।
N प्रारम्भिक पावर हो
M N बढाउन​को लागि वृद्धि हो
गुणांकहरू गुणांकहरूको श्रृंखलाहरू। एउटा सेक्सनद्वारा प्रत्येक गुणांकहरूको श्रृंखलाहरू जोडका लागि विस्तार गरिन्छ।
सङ्ख्याको चिन्ह फर्काउँछ । प्रकार्यले धनात्मक चिन्हका लागि परिणाम १ दिन्छ र ऋणात्मक चिन्हका लागि परिणाम -१ दिन्छ । यदि सङ्ख्या ० भएको खण्डमा त्यस पछिका प्रकार्यले जस्तै शून्य उत्पादन गर्दछ ।
सङ्ख्यासङ्ख्या जसमा सङ्ख्या सङ्केत निर्धारण गर्नु पर्दछ.
=SIGN(३.४)ले १ फर्काउदछ।
=SIGN(-४.५)ले -१ फर्काउदछ।
दिएको सङ्ख्याको (कोण)को साइन फर्काउँदछ ।
=SIN(PI()/2)ले १ फर्काउँदछ, PI/२ रेडियन को साइन।
=SIN(RADIANS(30))ले 0.5 , कोण 30 डिग्रीको साइन परिणाम फर्काउँदछ ।
सङ्ख्याको हाइपरबोलिक साइन फर्काउँदछ ।
=SINH(0)ले0फर्काउँछ,0को हाइपर्बोलिक् साइन।
सङ्ख्याको धनात्मक वर्गमूल फर्काउँदछ । सङ्ख्याको मान धनात्मक हुन जरुरी छ ।
सङ्ख्या सङ्ख्या हो जसको वर्ग मूल गणना गर्नु पर्दछ ।
=SQRT(१६)ले ४ फर्काउदछ।
सङ्ख्या *PIको वर्गमूल फर्काउँदछ ।
=SQRTPI(2)ले (2PI) को वर्ग मूल, लगभग 2.506628 फर्काउँदछ।
उपजोडहरू गणना गर्दछ । दायराले उपजोडहरू पहिलेनै समाहित गर्दछ तिनीहरू अगाडिको गणनाहरू प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिँदैन । यो प्रकार्य खाता भित्र फिल्टर गरिएका रेकर्डहरू लिनका लागि मात्र स्वत:फिल्टरहरू सहित प्रयोग गरिन्छ ।
प्रकार्य सङ्ख्या हो जुन दिएका प्रकार्यहरूको एउटाका लागि अडेको हुन्छ:
दायरा दायरा हो जसमा कक्षहरू संलग्न हुन्छन् ।
कक्षहरूको दायरामा सबै सङ्ख्याहरू थप्दछ ।
SUM(number1; number 2; ...; number 30)
सङ्ख्या १ देखि सङ्ख्या ३० ३० तर्कहरू जसमा जोड गणना हुन्छ ।
यदि तपाइँ 2;3र4अंकहरू संख्या 1;2र3पाठ बाकसहरूमा प्रविष्ट गर्नुहुन्छ भने9परिणामको रूपमा फर्काइनेछ।
=SUM(A1;A3;B5) तीन कक्षहरूको जोड गणना गर्दछ। =SUM (A1:E10) A1 देखि E10 कक्ष दायरामा भएको सबै कक्षहरूको जोड गणना गर्दछ।
ANDद्वारा लिङ्कगरेको सर्तहरू दिएको आचरणमा SUM() प्रकार्य सहित प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:
उदाहरण मान्दा: तपाईंले तालिकामा चालानहरू प्रविष्ट गर्नुभएको छ। स्तम्भ A ले चालानको मितिमान समावेश गर्दछ, स्तम्भ B ले रकमहरू। तपाईं एक सूत्र पत्ता लगाउन चाहानुहुन्छ जस्ले तपाईंलाइ एउटा मात्रै तोकिएको माहिनाका लागि सबै रकमहरूको कुल फर्काउन सक्छ, उदाहरणका लागि: त्यो रकम मात्रै जुन >=2008-01-01 देखि <2008-02-01 अवधि भित्र पर्छ​। मितिमानहरू सहितको दायराले A1:A40 समावेश गर्छ​, जम्मा हुने रकमहरू समावेश गरेको दायरा B1:B40 हो। C1 ले सुरुको मिति समावेश गर्छ​, 2008 -01-01, चालानहरू समावेश गर्नका लागि र C2 ले मिति, 2008-02-01, जुन अब समावेश गरिँदैन।
एरे सूत्रको रूपमा दिएका सूत्र प्रविष्ट गर्नुहोस्:
एरे सूत्रको रूपमा यसलाई प्रविष्टि गरिए अनुसार तपाईँंले Shift आदेश+ Ctrl सूत्रमा बन्द गर्न सामान्य कुञ्जी थिचाइको सट्टामा + Enter कुञ्जी थिच्न जरुरी हुन्छ । सूत्र सूत्र पट्टिमा कोष्ठकहरूद्वारा बन्द गरेको अवस्थामा देखाउनेछ ।
सूत्र यस तथ्यमा आधारित छ कि तुलनाको परिणाम 1 हो यदि मापदण्ड पूरा हुन्छ र यदि0भेटिएन भने। व्यक्तिगत तुलना परिणाम एक array को रूपमा व्यवहार गरिनेछ र म्याट्रिक्स गुणनमा प्रयोग गरिन्छ, र अन्तमा व्यक्तिगत मान परिणाम म्याट्रिक्स दिनको लागि कुल गरिनेछ।
दिएको मापदण्डमा रहेर निर्दिष्ट कक्षहरू थप्दछ । जब तपाईँं निश्चित मान खोजी गर्नुहुन्छ यो प्रकार्य ब्राउज दायरामा प्रयोग गर्नलाई प्रयोग हुन्छ ।
खोजीले नियमित अभिव्यक्तिहरूलाई समर्थन गर्दछ। तपाईं You "all.*" प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि "all" पछि कुनै पनि क्यारेक्टर लागेकाे पहिलो स्थान पत्ता लगाउनका लागि। यदि तपाईँंले नियमित अभिव्यक्ति भएको पाठ खोज्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँंले हरेक क्यारेक्टर सँग \_ क्यारेक्टर लाई अग्रगामि गर्नुपर्दछ। तपाईले नियमित अभिव्यक्तिको स्वचालित मूल्याङ्कन LibreOffice - प्राथमिकताहरूउपकरणहरू - विकल्पहरू - LibreOffice Calc - गणना
दायरा त्यो दायरा हो जसमा मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मापदण्ड खोजी मापदण्ड देखाउने कक्ष हो, वा आफैमा एउटा खोजी मापदण्ड हो ।यदि मापदण्ड सूत्रमा लेखिएको छ भने, यसलाई डबल उद्धरण द्वारा घेर्नुपर्दछ ।
SumRange दायरा हो जसको दायराहरू योगी हुन्छन्। यदि यो प्यारामिटर संकेत गरिएको छैन भने, दायरामा भेटिएका मानहरू संक्षेपमा छन्।
ऋणात्मक सङ्ख्याहरू मात्र जोड्न: =SUMIF(A1:A10;"<0")
यदि तपाईँं सङ्ख्याहरूको (तर्कहरूको वर्गहरूको जम्मा गर्दा) वर्गहरूको जम्मा गणना गर्नलाई चाहेको खण्डमा तिनीहरूलाई पाठ फाइल भित्र प्रविष्ट गर्नुहोस्
SUMSQ(number 1 to 30)
सङ्ख्या १ देखि सङ्ख्या ३० ३० तर्कहरूको जोड हो जसको वर्गहरू गणना गर्नुपर्दछ ।
यदि तपाइँ 2;3र4अंकहरू संख्या 1;2र3पाठ बाकसहरूमा प्रविष्ट गर्नुहुन्छ भने, 29 परिणामको रूपमा फर्काइने छ।
दिएको कोणको स्पर्शरेखा फर्काउँदछ ।
सङ्ख्या रेडियनमा कोण हो ।
=TAN(PI()/4) ले 1 फर्काउँछ, PI/4 रेडियनको ट्यान्जेन्ट।
=TAN(RADIANS(45))ले "१", ४५ डिग्री को tangent फर्काउछ।
सङ्ख्याको हाइपरबोलिक स्पर्श रेखा फर्काउँदछ ।
सङ्ख्या सङ्ख्या हो जसको हाइपरबोलिक स्पर्शरेखा गणना गर्नु पर्दछ ।
=TAN(0) ले ० फर्काउँदछ,० को हाइपरबोलिक स्पर्शरेखा।
दशमलव स्थानहरू हटाएर सङ्ख्यालाई छोट्याउन्छ​।
फर्काउँछ नम्बरबढीमागणना हुने दशमलव स्थानहरू।अधिकतम दशमलव स्थानहरू हटाइएका छन्, साइन बाबजुद।
TRUNC(Number; 0) ले धनात्मक सङ्ख्याहरूको लागि INT(Number) को जस्तै व्यवहार देखाउँछ, तर ऋणात्मक संख्याहरूको लागि प्रभावकारी रूपमा शून्य तिर मिलान गर्दछ।
दृश्यात्मकपरिणामको दशमलव स्थानहरू निर्दिष्ट गरिएको छLibreOffice - प्राथमिकताहरूउपकरणहरू - विकल्पहरू - LibreOffice Calc - गणना गर्नुहोस्
=TRUNC(1.239;2)ले 1.23 फर्काउँछ।9हराएको छ।
=TRUNC(-1.234999;3) ले -1.234 फर्काउँछ | सबै 9s (९ का मात्रा) बिलिप्त हुने छ |
दिएका तर्कहरूको रूपमा सबै सङ्ख्याहरू गुणन गर्दछ र गुणन फल फर्काउँदछ ।
PRODUCT(सङ्ख्या १ देखि ३०)
सङ्ख्या १ देखि सङ्ख्या ३० ३० तर्कहरू हुन्छन् जसमा गुणन फल गणना हुन्छ ।
=PRODUCT(2;3;4)ले 24 फर्काउँछ।
Title is: गणितिय प्रकार्य